Tonga tany Massachusetts ny «Hot spot» PCB ho an'ny fanondranana - Ellicott Dredges
Enga anie 1, 1990
Enga anie 1990
Source: Record News Engineering
Nandany vola 14 tapitrisa dolara ny tompon'andraikitra misahana ny tontolo iainana any Massachusetts mba hanadiavana sy handoroana “toerana mafana” an'ny biphenyls polychlorined (PCB) any amin'ny farany ambanin'ny seranan'i New Bedford. Ny fanadiovana dia nanadio ny antsanga tamina faritra 5 hektara teo amoron'ny reniranon'i Acushnet izay 45% ny akora simika ao amin'ny seranan-tsambo sy ireo loto mavesatra no mifantoka.
Ny seranan-tsambo 1000 hektara dia manana ny PCB avo indrindra amin'ny firenena ary iray amin'ireo toerana ratsy indrindra ao amin'ny lisitry ny laharam-pahamehana ho an'ny firenena Superfund. Ny fandavahana ny "faritra mafana" dia natao hamehezana ny fivezivezin'ny loto ao anaty seranan-tsambo.
Ny dingana voalohany amin'ny fanadiovana, noforonin'ny Corps of Engineers, dia nahitana fihadiana 10,000 4 cu.yd. ny fanambanin'ny vavahady mankany amin'ny lalina indrindra XNUMX-ft mampiasa Ellicott® Dredge an'ny cutterhead an'ny Brand Series 370 izay tantanan'ny AGM Marine Contractors izay hampihena ny fanaparitahana ny antsanga. Ireo fitaovana nohafoina dia halefa amin'ny alàlan'ny fantsom-pivoahana mirefy 3,000 metatra mankany amin'ny toerana fanariana voafetra eo amoron'ny rano ao New Bedford.
Ny fitaovana dia hodiovina, ary ny effluent amin'ny dewatering dia hotsaboina mba hanala PCB sy metaly mavesatra alohan'ny hamoahana azy ao amin'ny seranan-tsambo. Ny mason-tsivana voafafa dia hodorana ary handrava ireo PCB. Ny lavenona fandringanana misy ny metaly dia hohamafisina, halevina ary hosakanana vonjimaika eo amin'ilay tranokala. "Ny fampiasa farany azy dia miankina amin'ny fanadiovana ny seranan-tsambo rehetra," hoy i Mark Otis, injeniera sivily ao amin'ny biraon'ny Corp. New England any Waltham.
Ny drafitra momba ny dredging "hot spot" sy fanariana ny tany dia manaraka ny fanadihadiana nataon'ny mpanamory fiaramanidina izay nahitana ny fametrahana antsanga maloto tao anaty lavaka lalina tao ambanin'ny seranan-tsambo ary nikatona izany tamin'ny akora madio. "Tsy nahomby tamin'ny fahazoana satroka tena madio izahay," hoy i Otis. Saingy, io fomba io dia mety hifamatotra amin'ny dingana faharoa amin'ny fanadiovana ny seranan-tsambo, hoy ny mpitondra tenin'ny Sampan-draharaha misahana ny fiarovana ny tontolo iainana amerikana.
Ny Corps dia nanomboka ny dingana voalohany fanadiovana ny faran'ny 1991.
Namboarina avy amin'ny Record News Engineering